eyona motorola moto x iimeko ezimsulwa
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Amanqaku aphezulu angama-9 aphezulu kwiMoto Moto X yoHlelo oluSulungekileyo
Ukuba ujonge ukukhusela iflegi yangoku ye-Motorola flagship, wena neapos uze kwindawo elungileyo! Koku kulandelayo, siya & jonga ii-apos; siza kujonga kwi-9 ephezulu ye-Motorola Moto X yamatyala amsulwa okwangoku phaya.
Njengawo onke amatyala ethu angaphambili, iyantlukwano yayiyeyona njongo yethu iphambili xa sikhetha ezona meko zeMoto X ezinyulu. Kananjalo, thina kunye neapos siquka iimeko ezicacileyo ze-TPU, iimeko ezimbalwa ezinzima, iimeko ezingqindilili, kunye nemeko enkulu.
Nangona iapos ngokuqinisekileyo ingakhazimli njengothotho olutsha lweSamsung ye-S7, iMoto Moto X yoVavanyo oluSulungekileyo ihlala iyenye yezonaxabiso zibalulekileyo zexabiso lemali kwintengiso. Okwangoku, i-Moto X inyulu inokuba nayo nge-299,99 yeedola. Kule mali, kunzima ukufumana isindululo esinomtsalane kwimakethi ye-smartphone yase-US.
I-Case-Mate Isakhelo esiQatha
Ixabiso: $ 20
Njengazo zonke iifowuni ze-Motorola kunye neefowuni kule minyaka imbalwa idlulileyo, abathengi banokwenza ngokusesikweni u-2015 Moto X ococekileyo usebenzisa iwebhusayithi kunye neapos; s Moto-Maker iwebhusayithi. Ukuba u & apos; ukulungele ukuhlawula ngaphezulu ukwenza ii-aksenti zefowuni okanye ukrwele igama lakho ngasemva kwefowuni, ngokuqinisekileyo awufuni kuyifihla ifowuni yakho oyenzele yona phantsi kwetyala.
Ngokufumana ityala elikhulu kwi-Moto X echanekileyo, unokufumana amanqaku okhuseleko kwifowuni yakho ngelixa ubhengeza uyilo lwefowuni elungiselelwe wonke umntu (kubandakanya nawe).
Ixabiso lama- $ 20, i-Case-Mate Tough Frame Case bumper case isn & apos; kwicala elingabizi, kodwa kwixa elizayo xa i-Moto X Pure yakho ihlangana nomgangatho, wena kunye ne-apos; uya kuvuya kuba ukhethe imeko esemgangathweni.
I-Case-Mate Isakhelo esiQatha seMoto X yoHlelo oluSulungekileyo
I-Blason Halo Series Hybrid Cacisa
Ukuba ufuna ukukhuselwa okungaphezulu kunetyala elinokukunika kodwa ufuna ukubonisa uyilo lwefowuni, emva koko imeko ecacileyo ye-TPU inokuvela isisombululo esifanelekileyo.
Ixabiso lentengo efikelelekayo ye- $ 11.99, i-Blason Halo Hybrid Clear Case ye-Moto X iikiti ezipheleleyo kuzo zonke iibhokisi ekufuneka zenziwe licala le-TPU. Inomqolo obonakalayo ocacileyo, ii-bumpers ezifunxa umothuko, imiphetho ephakanyisiweyo ukukhusela umboniso, kwaye iiapos zenziwe ngento enqabileyo.
Ngamaqhekeza amathathu ongezelelweyo, ungabetha ii-bumpers ezinemibala ngelixa ugcina isiciko sangasemva esicacileyo. Jonga iifoto ezingezantsi ngolwazi oluthe kratya:
Elinye lawona matyala acacileyo e-Moto X aMsulwa
Isekethe yeCruzerlite Bugdroid
Ixabiso: $ 9.90
I-Cruzerlite Bugdroid Circuit Case ye-Motorola Moto X ecocekileyo lukhetho olunombala ngakumbi kodwa olunobunzima. Ngokwokhuseleko, le iseyicala le-TPU, oko kuthetha ukuba ufumana ukuxhathisa ekuqaleni kunye nokukhuselwa kwempembelelo, kodwa hayi ukhuseleko lomsebenzi onzima.
Ngaphandle kwepateni ye-nerdy kodwa enomdla ngasemva, enye into ongayithanda malunga ne-Cruzerlite Bugdroid Circuit yecala lokwahluka kombala. Kuba eli tyala lixabiso ngexabiso nje nge- $ 9.90, cinga ngokufumana iiyunithi ezimbalwa ezinemibala eyahlukileyo. Ngale ndlela, uya kutshintsha phakathi kwemibala edlalayo okanye esesikweni ngakumbi, kuxhomekeke kumxholo.
I-Cruzerlite Bugdroid Circuit yeMoto X eyiyo
Ixabiso: $ 14.99 ngexabiso
Kwimeko encinci kunye nobunzima, qiniseka ukujonga i-Incipio & apos; Intsiba ye-Ultra Thin Snap-On ye-Moto X echanekileyo. Eli tyala lenziwe nge-polycarbonate, eyinto enzima xa kuthelekiswa ne-TPU, nangona i-apos ayisiyonto intle yokufumana ukothuka.
Ityala le-Incipio Feather leMoto X lilula kodwa lihle kwaye liyafumaneka kuwo nawuphi na umbala ukuba nje limnyama.
Intsiba ye-Incipio yeMoto X yoHlelo oluSulungekileyo
I-Incipio Octane yenye yezona ngcelele zithandwa kakhulu phaya, kwaye nohlobo lweMoto X oluchanekileyo lwetyala ngokuqinisekileyo lelinye lokuqwalaselwa. Ityala le-Incipio Octane liza ne-TPU bumper kunye ne-hard polycarbonate back cover.
Kwi-Incipio kunye nesitayile, isimbozo se-Octane sibonisa uyilo olulula kodwa oluhle. Ngapha koko, unokukhetha phakathi kwemibala emibini yebhampasi kunye nemibala emithandathu yegobolondo yangasemva.
I-Incpio Octane yeMoto Moto X ecocekileyo
UKUXHASA Unicorn Beetle
Ixabiso: $ 13.99 ngexabiso
Njengenye indlela eya kwi-Incipio Octane, jonga i-SUPACASE Unicorn Beetle ye-2015 yeMoto Moto X Ecocekileyo, nelinye ityala elinika i-TPU bumper kunye ne-polycarbonate enzima. Ngokucacileyo, uyilo lwahluke kancinci (ngakumbi kwikamva), kwaye kufanele ukuba siqaphele ukuba ikhava yangemva ayisebenzi.
UKUXHASA I-Unicorn Beetle yeMoto X eyiyo
Ukusuka kweli nqanaba ukuya phambili, siza kuphakamisa ukugxila kwiMoto X Amatyala amsulwa anikezela ngokhuseleko olupheleleyo. Olunye ukhetho olufanelekileyo kolu luhlu yimeko ye-SUPACASE Rugged, eza ne-TPU bumper, iqokobhe elinzima le-polycarbonate ngasemva, kunye nesiciko sangaphambili nesikhuselo esakhelweyo.
Ixabiso lama- $ 20 SUPCASE kunye neepos; ityala elinemigca ye-Moto X yoHlelo oluSulungekileyo liza neziciko ezitshintshanayo ezintathu ezinombala ongwevu, isilivere negolide.
UKUSETYENZISWA KWE-Moto X yoHlelo oluSulungekileyo
I-Coat yeArms yeNkulumbuso
Ityala le-i-Blason Prime Series yeMoto X yoHlelo oluLungileyo inikezela ngokhuseleko olukhulu. Ngaphandle kwetyala lenziwe ngezinto ezinzima ze-polycarbonate ezinikezela ngokhuseleko lwempembelelo ngelixa umkhono wangaphakathi we-silicone unikezela ukhuselo olongezelelekileyo. Iikona zeli tyala ziza neendlela ezimbini zesiliconi zokuzikhusela nangakumbi kwimpembelelo.
Isigqubuthelo esingasemva sikwadibanisa indawo yokukhaba, kwaye icala lize nebhanti yeklip swivel holster. Kwicala elisezantsi, eli tyala longeza isuntswana lesambuku kwiMoto X eyiyo.
Ixabiso: $ 53.95
Ukuba ukhangele elona cala libukhali leMoto X yoHlelo oluSulungekileyo kunye nohlahlo-lwabiwo mali ayisiyongxaki, ke imeko yeOtterbox Defender yile nto kufanele ukuba uyayisebenzisa. Ityala liza neqokobhe elinzima le-polycarbonate, ukugoba amagwebu kwangaphakathi, isilayidi sangaphandle serabha, kunye nesikhuseli esakhelweyo.
Ixabiso kuma- $ 53.95, eli lelona tyala libiza kakhulu apha, kodwa ufumana ithuba lokufumana iwaranti yobomi.
I-Otterbox Defender yeMoto X eyiyo
Eyona fowuni t-mobile 2016
Eyona nto iphambili kwi-sim yefowuni ngo-2018
Isamsung kunye neapos ezibalaseleyo zeGlass Z Fold 2 5G ngequbuliso iyathengiswa ngexabiso eliphantsi ngokumangalisayo
I-AT & T & apos; brand new LG Stylo 5+ sele ithengiswa ngesaphulelo se-50 seepesenti
Ungazidlulisa njani iiKuki ezisuka kwiSelenium WebDriver ukuya kuQinisekiso
Ukuthengwa okungcono kweLwesihlanu oMnyama ngo-2018 kuphumile, gcina kwi-Samsung Gear kunye ne-Apple Watch, i-iPhone XR, i-iPad Pro kunye neNqaku 9
Intengiso entsha yoMculo weApple icacisa ukuba izandi ezinje ngeSpatial Audio
I-iPhone 12 / Pro / Max: iingcebiso kunye namacebo